Kedu Ọrụ Dị Mkpa na Ngalaba Azụmaahịa Ntaneti Taa? | Martech Zone
Maka ụfọdụ ndị ahịa m, ana m ejikwa talent niile dị mkpa maka mbọ ahịa ahịa dijitalụ ha. Maka ndị ọzọ, ha nwere obere ndị ọrụ ma anyị na-emewanye nka dị mkpa. Maka ndị ọzọ, ha nwere otu otu egwuregwu siri ike n'ime ma na-achọ nduzi zuru oke yana echiche mpụga iji nyere ha aka ịnọ ọhụụ ma chọpụta ọdịiche.
Mgbe mbụ m malitere ụlọ ọrụ m, ọtụtụ ndị isi na ụlọ ọrụ gwara m ka m ọkachamara na-achụso a kpọmkwem ọrụ; Otú ọ dị, ọdịiche m hụrụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ bụ na ha adịchaghị enwe otu egwuregwu kwesịrị ekwesị na ọ na-emepụta ọdịiche na atụmatụ ha nke a na-adịghị ahụ anya. Nke ahụ apụtaghị na ha enweghị afọ ojuju ọ bụla, ọ pụtara na ha anaghị enweta ike ha nwere akụnụba ha.
N'uche m, ekwenyere m na azụmahịa ọ bụla kwesịrị ịnwe onye ọzọ na mpụga ya na mbọ ahịa ahịa dijitalụ ya. Mgbe m, n’ezie, na-ele mmadụ anya n’ihu… enwere ọtụtụ ihe kpatara ya:
Ikike Ngwá Ọrụ - Enwere m ngwa ọrụ nke ngwa ọrụ m nwere ike ịbelata ọnụ ahịa nke ndị ahịa. Nke a nwere ike ịchekwa ụlọ ọrụ ezigbo ego.
Focus - Dika ihe si na mpụta, enwere m uru dị iche na anaghị m eche maka ọrụ ụlọ ọrụ, nzukọ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ma ọ bụ ọbụlagodi (ọtụtụ oge) mmefu mmefu ego. A na-akwụ m ụgwọ idozi nsogbu wee na-agbaso nke ahụ - na ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ maka uru m nyere kama ịkwụ ụgwọ ọnwa nke nwere ike ọ gaghị arụpụta.
Nhọrọ - Ọ fọrọ nke nta ka ụlọ ọrụ ọ bụla nwee ntụgharị, yabụ enwere m ike ikpuchi oghere na nka mgbe ndị ahịa m nwere ndị ọrụ na-atụgharị. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nzukọ ọ bụla nwere ntụgharị!
Niche ọkachamara - Ọtụtụ ụlọ ọrụ enweghị ike ịnwe ego maka ọrụ ọ bụla dị mkpa, mana m mepụtara netwọkụ nke nka karịa afọ na ndị isi egosipụtara. Nke ahụ pụtara na enwere m ike iweta ọrụ ndị dị mkpa dị ka achọrọ, na-eme ka mmefu ego na-eweta ma na-eweta ezigbo ndị mmeri nke ga-eme ka ohere ịga nke ọma.
Oke nka - Site na-arụ ọrụ gafee ụlọ ọrụ na ịnọ n'elu ụlọ ọrụ na-ewu ewu, m na-ewetara ndị ahịa m ihe ngwọta ọhụụ. Ọ bụrụ na anyị nwaa atụmatụ ma ọ bụ ikpo okwu n'otu ụlọ ọrụ ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma, m na-ewetara ya ndị ahịa m niile ma mejuputa ya na obere nsogbu karịa ma ọ bụrụ na onye ahịa ahụ mere ya n'onwe ya.
Ihe omuma a sitere na Spiralytics, Etu esi ahazi ndi otu ahia ahia gi, na-akọwa ọrụ 13 dị mkpa maka otu ndị na-azụ ahịa dijitalụ nke oge a iji nwee ihe ịga nke ọma.
Ọrụ Ngalaba Ahịa Digital:
Digital Marketing Manager or Onye njikwa ọrụ - iji lekọta ọrụ ma hụ na ndị otu na-arụ ọrụ nke ọma.
Creative Director or graphic Designer - iji dobe nkwekọ anya nke nkwukọrịta site na ọwa dijitalụ.
Developers - mmekorita na ihe mmekorita di nkpa maka otu obula n’oge a, ya mere inwe otu ndi akwadoro iwulite azu-azu siri ike site n’inwe otutu ihe omuma nke onye oru n’elu iru bu ihe di nkpa.
Dijitalụ ahịa nyocha - ọ dị mkpa na ndị ọ bụla na-azụ ahịa dijitalụ nwere atụmatụ ezubere iji tụọ mmetụta ya yana ịkọ akụkọ dị mma nke ga-enyere ndị isi na ndị otu ahụ aka ịmata nsonaazụ ya.
Digital Marketing strategist - ebumnuche ọ bụla kwesiri inyere aka iji mee ka ihe ngosi dị mkpa na ebumnuche nke nzukọ a. Onye na-ahụ maka ịkọwa ihe na-adaba na mpempe akwụkwọ ndị a ma hụ na ọwa niile, ndị na-ajụ ase na mgbasa ozi zuru oke.
SEO Manager ma ọ bụ Ọkachamara - njin ọchụchọ na-aga n'ihu na-eduga ọwa niile na onye ọrụ nzube iji nyochaa mkpebi ịzụta. Ngwa nyocha ihe eji achọ ọganiihu na-enye plethora nke ozi ndị otu ahịa ahịa dijitalụ nwere ike iji yana ọwa zuru oke maka ịkwọ ụgbọala. Inwe onye na-anya ụgbọ ala ndị a na-eri-irè azum dị mkpa maka nzukọ ọ bụla.
Chọọ Ọkachamara Mgbasa Ozi - ebe nyocha ihe omumu na-achọ ike na ikike iduga na peeji nsonaazụ ọchụchọ engine, mgbasa ozi nwere ike mejupụta ọdịiche ahụ iji dọọ ụzọ. Ọ bụghị na-enweghị ego na nka. Adszụta mgbasa ozi nwere ike bụrụ mmejọ jọgburu onwe ya ma ọ bụrụ na ịnweghị nka.
Ngosipụta Ọkachamara Mgbasa Ozi - enwere saịtị ndị ọzọ nwere ndị na - ege gị ntị ị na - achọ iru, yabụ mgbasa ozi na saịtị ndị ahụ iji mee ka ị mata, itinye aka na mgbanwe bụ atụmatụ siri ike. Agbanyeghị, ọnụọgụ nke nyiwe mgbasa ozi, ike ezubere iche, ụdị mgbasa ozi, yana mgbanwe mgbanwe abụghị ihe na-abụghị sayensị. Inweta mmadụ itolite mmetụta nke mgbasa ozi ngosi gị kwesịrị.
Onye njikwa Social Media ma ọ bụ Ọkachamara - soshal midia na-aga n'ihu na-abụ ihe enyemaka maka itinye aka na ndị na-achọ ịzụ ahịa gị yana nnukwu ọwa maka ịmepụta ikike nke aka gị ma ọ bụ nke ọkachamara. Inwe mmadụ nyocha, nyochaa, ma bulie obodo gị site na ịkwado, nkwado, na ozi bụ atụmatụ siri ike maka akara ọhụụ ọ bụla.
Ahụmahụ onye ọrụ or Onye Okike Interface Onye Okike - Tupu onye nrụpụta n’ihu gị enwee ike idepụta ahụmịhe, ọ dị mkpa ka e mepee ya ma nwalee ya nke ọma iji belata nkụda mmụọ ma melite afọ ojuju ndị ahịa. Inwe onye ghotara mmadụ interface kọmputa imewe bụ ihe dị mkpa mgbe ị na-emepe ahụmahụ ndị ahụ.
Onye edemede - Akwụkwọ ahụaja, jiri okwu, edemede, ederede blọgụ, yana mmelite mgbasa ozi mmekọrịta chọrọ ndị ode akwụkwọ nwere ọgụgụ isi nke nwere ike igosipụta ụda, ụdị mmadụ na ozi ị na-achọ ịgbasa. Inwe onye na-ede akwụkwọ na ndị ọrụ nwere ike ịbụ okomoko maka ọtụtụ… mana ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ itinye ego na ọdịnaya gị nwere mmetụta ọ bụla.
Ahịa Email - Site na nnyefe, n’okpuru ahịrị, na imewe ọdịnaya… email bụ usoro nkwukọrịta pụrụ iche chọrọ akara na nka iji nweta nsonaazụ. Igbe igbe anyị juru n'ọnụ n'oge a, yabụ ịnweta ndị debanyere aha imeghe ma pịa bụ ihe ịma aka.
Ọkachamara Ọdịnaya Ọdịnaya ma ọ bụ Strategist - Gini bu isiokwu nke olile anya gi na ndi ahia gi na acho? Kedu ọbá akwụkwọ nke ọdịnaya ị na-ewepụta dị ka? A ọdịnaya marketing strategist enyere prioritize na mata isiokwu ndị na-aga resonate well nakwa dị ka n'ịhụ na ị na-anọ a isi nke gị mpi.
Nke a bụ Full Infographic:
Tags: dijital ahịadigital marketingọnọdụ dijitalụ dijitalụọrụ ahia dijitalụotu ahia dijitalụdijitalụ ahịa ahaonye na-ese ihe ngosiọkachamara ịzụ ahịa ọchụchọonye njikwaonye na-elekọta mmadụ na mgbasa ozi